March 8, 2021 - Channel Lover
တော်လှန်ရေးလူငယ် တွေဦးဆောင်ပြီးတည့်မတ်ပေးလိုက်တဲ့ အယူအဆတစ်ခု
March 8, 2021 by Channel Lover
တော်လှန်ရေးလူငယ် တွေဦးဆောင်ပြီးတည့်မတ်ပေးလိုက်တဲ့ အယူအဆတစ်ခု Photo တွေ့တော့ ပျော်လွန်းလို့ အတွေးတွေလဲ နယ်ချဲ့လို့….. ပြောပါရစေ ကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူတိုင်းနီးပါး ကြုံဖူးပါတယ်။ အမေ့ထဘီတွေနဲ့ အဖေ့ပုဆိုးတွေ ရောမလျှော်နဲ့ ။ သားရဲ့ပုဆိုးနဲ့ သမီးရဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီတွေ၊ ထဘီတွေနဲ့ရောမလျှော်နဲ့လို့ အမြဲတမ်းအိမ်ကနေမှာတာ၊ ပြောတာ ကြုံရပါတယ်။ အဲ့လိုမျိုး ပြောတာက မိန်းကလေးက ယောက်ျားလေး ထက်ဘုန်းနိမ့်တယ်ဆိုတဲအယုံအကြည်၊ အတွေးအခေါ်နဲ့ လူကြီးတွေက ဆက်ဆံပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။ တကယ်တော့ အဲ့လိုမျိုး ထဘီတန်းအောက်လည်းမသွားရဘူး၊ ထဘီနဲ့မထိရဘူး ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်က သား ယောက်ျားလေးရော ၊ သမီးမိန်းကလေးပါ နှစ်ယောက်လုံးကိုဖျက်ဆီးပါတယ်။ သားယောက်ျားလေး ကိုဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတာက သူရဲ့ဖြစ်တည်မှုက တခြားသူတွေထက်မြင့်မြတ်တယ်- အဲ့ဒါကြောင့်မိန်းကလေးကို တန်ဖိုးထားစရာမလိုဘူးလို့ သင်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်တယ်။ ဒီလိုယောက်ျားတွေနဲ့ချစ်သူဖြစ်ဖူး အိမ်ထောင်ကျထားတဲ့သူတွေသိမှာပါ ဘယ်လောက် ဆိုးတဲ့အတွေးအခေါ်လဲဆိုတာ.. သမီးမိန်းကလေးဆိုရင်လည်း ယောက်ျားလေးက ကိုယ့်ထက်ဘုန်းမြင့်တဲ့အတွက် … Read more
သဇင်ထူးမြင့်အပါအဝင် ခင်လှိုင်တို့တစ်မိသားစုလုံး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ
သဇင်ထူးမြင့်အပါအဝင် ခင်လှိုင်တို့တစ်မိသားစုလုံး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ “အလှူလုပ်နေရင်း ဝရမ်းထွက်လာလို့ သဲတို့မိသားစု တစ်ယောက်တစ်နေရာစီ ရှောင်လိုက်ကြရပါပြီ… အနုပညာရှင်တွေကို cdmငွေတွေလိမ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တကွတင်ထားတာတွေတွေ့နေပါတယ်… ဝရမ်းပြေးတင်မဟုတ် ငွေလိမ်သွားတဲ့သူတွေအဆင့်ထိ အရှက်ခွဲခံနေရတာ မိုက်ရိုင်းလွန်းတယ်…. အသွေးသားထဲထိနာတယ်နော်… လောလောဆယ်မှာ ဖေဖေရောအဆင်ပြေပါ့မလား ကိုကြီးတွက်လည်း စိတ်ပူနေရတယ် ကိုယ်တိုင်လုံခြုံဖို့တွက်လည်း ပူရပြန်တယ် ပြည်သူတွေအားလုံးတွက်ပူပန်နေရတယ် တစ်ယောက်တစ်နေရာစီနဲ့ ဘယ်တော့များမှ မိသားစုတွေပြန်ဆုံခွင့်ရမှာလဲ😓 အရှေ့ထွက်လို့မရပေမယ့်လည်း နောက်ကွယ်ကနေဆက်ပြီးအတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်သွားမယ် လှူသွားမယ် အိမ်ပြန်ချင်တဲ့တွက် အရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမယ်💪🏻” ဆိုပြီး သဇင်ထူးမြင့်ကတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ unicode သဇငျထူးမွငျ့အပါအဝငျ ခငျလှိုငျတို့တဈမိသားစုလုံး ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနရေ “အလှူလုပျနရေငျး ဝရမျးထှကျလာလို့ သဲတို့မိသားစု တဈယောကျတဈနရောစီ ရှောငျလိုကျကွရပါပွီ… အနုပညာရှငျတှကေို cdmငှတှေလေိမျပါတယျဆိုတဲ့သတငျးနဲ့တကှတငျထားတာတှတှေနေ့ပေါတယျ… ဝရမျးပွေးတငျမဟုတျ ငှလေိမျသှားတဲ့သူတှအေဆငျ့ထိ အရှကျခှဲခံနရေတာ မိုကျရိုငျးလှနျးတယျ…. အသှေးသားထဲထိနာတယျနျော… လောလောဆယျမှာ ဖဖေရေောအဆငျပွပေါ့မလား ကိုကွီးတှကျလညျး စိတျပူနရေတယျ ကိုယျတိုငျလုံခွုံဖို့တှကျလညျး ပူရပွနျတယျ ပွညျသူတှအေားလုံးတှကျပူပနျနရေတယျ … Read more